Galmada | Zanzu
Jidhka iyo galmada
Galmadu waa galmada gelinta eesiilka amafutada e guska adag.
Gelinta gudaha siilka;
Ninka dareenku kacsanyahay waa uu kacsan karaa. Gusku ka dib waxa uu la bararaa dhiig. Way sii waynaataa oo adkaataa oo sare ayay u kacdaa.
Gabadha kacsataa waxay heshaa siil qoran. Tani waxay caawisaa inuu gusku galo siilka.
Haweenaydu waxay uurasan kartaa keliya haddii:
ninka shahwadiisu gasho siilka haweenayda iyo ilma galeenka haddii
ay haweenaydu ku jirto muddadii bacrimida ee bisha
Haddii aadan hayn rabitaanka carruur ku haysato hadda, isticmaal ka hortaga uurka.
Nin iyo haweenay isku galmoonaya Yoolku waxa uu saaranyahay guska gelitankiisa siilka.
Faahfaahinta guska gudaha ugu jira siilka ee laga arkayo gudaha.
Faahfaahinta guska gudaha ugu jira siilka ee laga arkayo gudaha. Shahwada ka baxay guska oo gelaysa ilma galeenka.
Nin iyo haweenay, ama 2 nin waxay isaga galmaood gelinta futada.
Haweenay ma uuraysan karto dhexda gelinta futada. Si kastaba ha ahaatee, hubso in shahwadu aanay gelin siilka.
Galmada tusaale ahaan: 2 rag u jiifa dhinacooda. Keliya jiifa xaga dambe ee ka kale.
Sababaha loo sameeyo galmada.
Waxaad u samayn kartaa galmada asbaabo kala duwan, tusaale ahaan waxaad doonaysaa:
inaad ka dhasho carruur (keliya dhexda gelinta siilka);
khibrada ka hesho farxada galmada;
muuji jacalyl iyo dareeno kale;
la kulanto kalgacalka;
Galmada muddada dhiiga caadada
Haweenka qaarkood waxay doonaan in loo galmoodo muddada dhiiga caadada, kuwa kale ma sameeyaan Haweenaydu waxa loo galmoon karaa muddada dhiiga caadeeda haddii ay doonto. Ma keeni doonto dhibaatooyin nadaafada ah.
Uma baahnid inaad hamooto wakhti kasta oo aad galmooto. Dad badan inta badan hamad sare ma laha.
Waxaad ka samayn kartaa galmada meelo kala duwan: jiif, fadhi, istaag ama foorar.
Waxaa jira qaabab kale oo galmada loo sameeyo, ka sakow galmada.
Kala hadal lamaanahaaga wax ku saabsan rabitaankaaga iyo dareemada. Si wada jir ah waxaad go'aamin kartaa waxa ay tahay galmada wanaagsan labbadiinaba.
Galmada tusaale 1: Ninku waxa uu ku dul jiifsadaa haweenayda. Haweenaydu waxay kala bixisaa lugaheeda.
Galmada tusaale 2: Haweenaydu waxay ku taagantahay gacmaheeda iyo jilbaha. Ninku waxa uu ku fadhiistaa jilbahiisa isagoo iyadda ka dambeeya.
Galmada tusaalaha 3: ninku wuu taaganyahay. Haweenayduna way ka sii jeesata. Ninku wuxuu sare u qaadaa mid ka mid ah lugaheeda.
Galmada tusaalaha 4: ninka iyo haweenaydu waxay u jiifsadaan dhinacyda, ninku waxa uu ka dambeeyaa haweenayda.
Galmada tusaale 5: Haweenayda waxay ku fadhiisataa xaga sare ee ninka.
Iska ilaalinta STI iyo HIV
Waxaad ku qaadi kartaa STI iyo HIV dhexda galmada Waxaad isticmaali kartaa kondhom si aad naftaada u ilaaliso iyo lamaanahaaga.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Galmada
Galmada, khamrada iyo maandooriyaha
Siday galmadu u eegtahay marka u horaysa?